China Model No: Chinese Manufacture Automatic Control Y81 Series Hydraulic Scrap Metal Press Aluminium Baler Machine ye Metal Press Recycling fekitori uye vatengesi | Mubatanidzwa Pamusoro
Nzvimbo Yekwakabva JIANGYIN, CHINA
Hydraulic pressure 100-3000 Matani
Bale size 300 *300 mm kana Tsika
Chamber size 1200*600*700 mm kana Tsika
Kunze-bale nzira Forward out bhareBuda kunze bare
Operation Manual kana PLC kutonga
Hydraulic scrap metal press baler machine ine mabhenefiti akanaka eindasitiri yekudzokorodza simbi. Mazuvano, kushomeka kwezviwanikwa idambudziko rakatarisana nenyika dzese. Hazvina mhosva kuti nyika dzichiri kusimukira kana dzakasimukira, maitiro ekuita zvakanakisa kudzokorodza inogara iri nyaya inopisa. Saka isu tinogadzira marudzi ese e hydraulic metal baler muchina kuti vatengi vedu vabate nesimbi yavo yakaraswa kuti isangane nezvinodiwa nevatengi vedu.
Hydraulic metal baler yaigona kubata nemazvo marudzi ese esimbi simbi, shavings yesimbi, simbi simbi, aluminium, mhangura uye kumwe kuchaja kwakakodzera kwakasvinwa mune rectangular, cylindrical, octagonal chimiro uye mamwe maumbirwo kuderedza mutengo wekufambisa uye kunyunguduka uye inogona kuvandudza kukurumidza kwe choto.
● Hydraulic drive, kushanda kwakadzikama uye kusina ruzha, kukurumidza kuwedzera kukurumidza, simba guru rekuwedzera, compact block, kwete nyore kupararira.
● Chisimbiso che cylinder chinotora mhete yeGRAI inotengeswa kunze kwenyika, iyo ine basa rakanaka rekuvhara uye yakasimba kupikisa.
● Kuisa nyore, kutsika kwetsoka, kusina nheyo, nheyo, nezvimwe.
● Coefficient yakakwirira kupfuura yechinyakare sando kurongedza, mechanical packaging, nezvimwe.
● Manual kana PLC automatic control iri nyore kushanda nekuchengetedza.
● Vatengi vanogona kusarudza simba remagetsi kana dhiziri-inotyairwa jenareta muchina, dizeli drive muchina unogona kukubatsira kuwana mobile pressing simbi.
● Yedu hydraulic metal baler muchina unogona kukubatsira kuchengetedza basa, kuvandudza simbi kudzoreredza, kuwedzera mutengo wekutengesa uye kugadzirisa purofiti.
● Inogona kukubatsira kuchengetedza nzvimbo yekushanda, inobatsira kuhutungamiri hwesaiti.
● Vatengi vanogona kugadzirisa misimboti yekurongedza uye saizi zvinoenderana nezvavanoda pakutakura kana kuchengetedza.
Nominal Force (Toni)
Chamber size(L×W) mm Bale size(L×W) mm Simba (KW)
1600×1200×800 400 × 400 2×18.5
3000×2500×1200 600 × 600 2×45
Yedu Hydraulic Scrap Metal Baler Machine inopa yakakurumbira mhando muchina zvikamu, tanga tichishandira pamwe nevakawanda vane mukurumbira pasi rose brand supplier, seSIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI uye zvichingodaro kweanopfuura makore gumi.
Yedu hydraulic simbi baler muchina unoshandiswa zvakanyanya muinotevera indasitiri:
● Metal recycling industry, yedu hydraulic metal baler machine inogona kuita simbi yakarashwa kuita mabhero akaenzana,
● Indasitiri yemotokari yakarasika, yedu hydraulic metal baler machine inoshandiswa zvakanyanya pakutsikirira muviri wemotokari.
● Metal foundry uye maindasitiri ekunyungudutsa, mamwe maindasitiri akarasa simbi kana simbi chip panguva yekugadzira inogona kudzvanywa.
● Hardware industry. Zvimwe zvigadzirwa zvesimbi zvinogona kudzvanywa nemuchina wedu we hydraulic metal baler.
● Indasitiri yekugadzira michina. Kurongedzerwa nekukochekera zvirashwa, marara, hupfu nezvimwe zvinhu zvesimbi zvinobatsira zvikuru kunharaunda yewekishopu, kudzokorodza marara uye kushandiswa kwevanhu.
Isu tichashandisa yakaputirwa firimu kurongedza uye mapuranga kurongedza kuchengetedza yedu hydraulic scrap metal baler muchina.
Tarisa Hydraulic Metal Baler Machine yeMetal Recycling muAction!
Zvakapfuura: Muenzaniso Kwete: Chinese Manufacture Automatic Control Y83 Series Hydraulic Metal Chip Briquetting Press Machine yeSimbi Kudzokororwa
Aluminium Baler Machine
Muenzaniso Nha: Chinese Manufacture Automatic Control...
Muenzaniso Nha: Chinese Manufacture Q91Y Series Hydra...
Model Kwete: NY Series hydraulic inopisa kutenderera kuvhara ...
Muenzaniso Nha: Chinese Manufacture Manual Control Y8...
Aluminium Foil Baler Machine, Leaf Compactor uye Baler, Zvimedu Metal Compactor, Y81 Hydraulic Baler, Homemade Cardboard Baler, Pop-Pamusoro Inogona Baler Equipment,